IBhunga leSigqeba se-UNWTO Licacisa: Ileta entsha evela eChile
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » IBhunga leSigqeba se-UNWTO Licacisa: Ileta entsha evela eChile
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseChile zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • komzila Ngoku
Njengoko kulindelwe kwaye egameni lamalungu e-32 yeSigqeba esiLawulayo, uMongameli weBhunga leSigqeba se-UNWTO, uJosé Luis Uriarte Campos waseChile uqinisekisile kwiLungu leLungu le-UNWTO isincomo seBhunga eliLawulayo elihlangene ngoJanuwari kulo nyaka ukuba liphinde linyulwe. UMnu Zurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele we-World Tourism Organisation kwixesha le-2022-2025.
UMphathiswa wezoKhenketho osuka eChile ligqwetha. Njengentloko yeBhunga eliLawulayo le-UNWTO yangoku, uthathe inyathelo elibalulekileyo izolo. Wacacisa ukuba iBhunga eliLawulayo liye lasebenza kwiMimiselo ye-UNWTO xa ikhetha uZurab Pololikasgvili ngoJanuwari. Amagqwetha anokufunda phakathi kwemigca.
UMnu. Campos uchaze ngokuchanekileyo inkqubo yeBhunga eliLawulayo elihlangeneyo kwaye yaqhubeka ngokusekwe kwimithetho ye-UNWTO, yintoni ekungekho mntu wayibuzayo.
Emva kwakho konke, akuyiyo impazamo yeBhunga leSigqeba se-UNWTO, ukuba i-UNWTO General Assembly ayikwazanga ukuqinisekisa isigqibo esenziwe ngabo, ngakumbi xa imeko yayitshintshile, kwaye iBhunga eliLawulayo lalingazi ngokupheleleyo into eya kutshintsha phakathi kosuku isigqibo. kwenziwa kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
Kunokuthiwa isizathu sokuba neenyanga ezininzi phakathi kwesigqibo kunye nokuqinisekiswa kukuvumela ngokuthe ngqo ukuba utshintsho luthathelwe ingqalelo.
Ngoku kwiNdibano Jikelele ezayo yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) intlanganiso ngeentsuku nje ezimbalwa eMadrid ukuqinisekisa okanye ukungangqini isindululo seBhunga eliLawulayo ukususela ngoJanuwari walo nyaka.
Xa ujonge i-UNWTO, xa ujonge uNobhala-Jikelele I-Pololikashvili, kwaye xa ujonga indlela amalungu eBhunga eliLawulayo acinga ngayo namhlanje, ivakalelwa kukuba siseplanethi eyahlukileyo, xa kuthelekiswa nalapho sasikhona ngoJanuwari, okanye ngaphambili ngoSeptemba.
Amalungu angama-33 eBhunga lesiGqeba esiLawulayo angala 1. Saudi Arabia – 2. Algeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brazil- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. China – 9. Congo – 10. Ivory Coast – 11. Egypt – 12. Spain – 13. Russian Federation – 14. France – 15. Greece – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Islamic Republic of Iran- 20. Italy – 21. Japan – 22. Kenya- 23. Lithuania- 24 Namibia – 25. Peru – 26. Portugal – 27. IRiphabhlikhi yaseKorea – 28. Romania- 29. Senegal – 30. Seychelles – 31. Thailand – 32. Tunisia – 33. Turkey – iqhutywa ngokholo oluhle naphantsi kwemithetho engqongqo ebekiweyo. xa kuvotwa ngoJanuwari.
Ngaphantsi kwemigaqo yangoku, ukuqinisekiswa kwesi sincomo kuyimfuneko nge-2/3 yesininzi seNdibano Jikelele ezayo.
UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili ubeke iBhunga eliLawulayo kwindawo leyo, ebeka ixesha elifutshane lentlanganiso yonyulo. Oku kugqitywe kwintlanganiso yesiGqeba esiLawulayo kwilizwe lasekhaya likaNobhala-Jikelele, iGeorgia kunyaka ophelileyo. Oku kwakhona kwaphakamisa amashiya ngelo xesha.
UMphathiswa waseChile wayengakhokeli 112th. Ibhunga lesiGqeba xa esi sigqibo senziwe ngoSeptemba kunyaka ophelileyo eGeorgia.
Iintlanganiso zeBhunga lesiGqeba esiLawulayo azihlali kwilizwe lasekhaya likaNobhala-Jikelele.
Ngelo xesha u-Hon. NguNajib Balala waseKenya owayephethe. Akuyomfihlo ukucinga ukuba u-Balala okwangoku uxhasa uNobhala-Jikelele kwisiqinisekiso sakhe kwiveki ezayo.
Ngenxa yolu hambo, mnye kuphela umgqatswa ovela e-Bahrain okwazileyo ukungena kugqatso phantse engenalo ithuba lokukhankasela ngexesha lokuvalwa kwe-coronavirus yehlabathi. Akazange abenalo ithuba lokwenyani, kwaye abanye abagqatswa aba-6 abakwazanga ukuvelisa amaphepha ngokukhawuleza ngokwaneleyo ngexesha elincitshisiweyo, nangexesha le-COVID-19 lokungenela ugqatso. Oku kuquka ilungu lebhodi ye-WTN kunye nowayesakuba yi-CEO yeBhodi ye-Nepal yezoKhenketho u-Deepak Joshi.
Ukuba bekukho ithambo lobulungisa kumbutho kaNobhala Jikelele, ebeza kucela ukwandisa inkqubo yonyulo ngaphaya kukaMeyi. Endaweni yoko, watyhala ixesha elifutshane kakhulu ukuba iBhunga lesiGqeba esiLawulayo lihlangane kwakhona kwaye limvotele. Ufanele ukuba wayeqinisekile ukuba angajongani nokhuphiswano oluqatha ngoJanuwari – kwaye akazange akwazi.
Emva kokuba isizathu sokuqala sokususa unyulo ukusuka ngoMeyi ukuya kuJanuwari siphelisiwe, oko kukuthi umboniso wezorhwebo weFITUR, uNobhala-Jikelele akazange ahoywe. isicelo nasemva kokuba ileta evulekileyo yamkelwa ngooNobhala Jikelele ababini, ziinkokeli eziquka amagama afana noCarlos Voegeler, uNjingalwazi Geoffrey Lipman, uLouis D'Amore nabanye. Le leta yabongoza uNobhala-Jikelele ukuba aqhubele phambili intlanganiso yonyulo yeSigqeba soLawulo ukuya kumhla wokuqala okanye ngcono ngaphaya.
UNobhala-Jikelele wayesazi kakuhle ukuba ukuvumela ixesha elongezelelweyo kwakuya kuvula umgangatho wokhuphiswano. Endaweni yoko, watyala yonke imizamo yakhe ekhokelela kwintlanganiso yeBhunga eliLawulayo kaJanuwari ukuze abonelele ngokukodwa kumazwe ebhunga lesigqeba, eshiya amanye amazwe angamalungu e-UNWTO kunye nengxaki ye-corona, efuna intsebenziswano necandelo labucala, ngakumbi i-WTTC ecaleni.
Xa iNkulumbuso yaseGeorgia yabamba isidlo eMadrid ngobusuku obungaphambi konyulo, umviwa waseBahrain wahlala engekho ekuqhankqalazeni.
Ngokucacileyo, eli nyathelo lasebenzisa inkqubo enobulungisa, kodwa konke oku kusenokuba kwakuphakathi kwemigaqo nemigaqo-nkqubo. Ewe kunjalo, imimiselo enjalo kunye nemigaqo-nkqubo yafakwa xa umhlaba wawungazi ngeCoronavirus.
Njengoko kucaciswa nguMhloniphi. UNobhala-Jikelele uFrancesco Frangialli kwi-hyileta evulekileyo epapashwe kule veki nje, ukuba semthethweni akwanelanga.
Ekulawuleni inkqubo, unokuba semthethweni kunye nokuziphatha okubi.
Inkqubo yonyulo ingaba ngokusemthethweni ngokuhambelana nemimiselo, kodwa kwangaxeshanye ingalunganga kwaye ingalingani. Ekupheleni kosuku inkqubo ayisayi kuba yeyokuziphatha.
Njengoko uSophocles wabhala: "kukho inqanaba elingaphaya kokuba nobulungisa bube bubugwenxa".
Ileta yesibini evulelekileyo eyanikezelwa ngowayesakuba ngunobhala – iinjengele ngokumalunga nokufunyaniswa kwekhomishini yeenqobo ezisesikweni, kwaye oko kufunyanisiweyo kufanele kube sisizathu sokuba naliphi na ilungu elinengqondo ephilileyo lithi “ima kancinci”
Zininzi iinyani iBhunga eliLawulayo elingazange lizazi xa livotela uZurab Pololikashvili
Inyani yokuba Iintetha ezothusayo nezigxekayo zegosa lokuziphatha kwingxelo yakhe kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo, kwaye uninzi lwangaphambili lwe-UNWTO Amagosa aphambili athatha inyathelo kwaye abhala ileta evulekileyo ebhekiswe kumazwe angamalungu abonisa ngokucacileyo ukuba kukho into engalunganga kakhulu kwi-UNWTO.
Ukuphathwa kakubi, ukuxhatshazwa kwabasebenzi, into yokuba ukugxekwa akuvumelekanga kwi-UNWTO kuvele ekukhanyeni emva kwengxelo yeKomishoni yokuziphatha.
Le ngxelo ibingaziwa kwiBhunga eliLawulayo xa ivotela uZurab:
Lo mhlathi kwingxelo yeenqobo ezisesikweni uyawushwankathela:
Ngaphezu kweminyaka engama-35 yenkonzo phantsi koonobhala jikelele abathandathu boMbutho, apho ngaphezulu kweminyaka engama-20 inikezelwe kwimigaqo yokuziphatha kunye noxanduva lwentlalo, iGosa langaphakathi leeNdlela zokuziphatha ngoku lelona gosa linenkonzo ende eUnited States. umbutho.
Ngenxa yesi sizathu, ndiye ndakwazi ukujonga ngenkxalabo kunye nosizi olukhulayo lokuba izenzo zangaphakathi ezicacileyo ezazikho kulawulo lwangaphambili, phakathi kwezinye izinto, malunga nokunyuswa, ukuhlelwa ngokutsha kwezikhundla kunye nokuqeshwa, kuye kwaphazamiseka ngokukhawuleza, kushiya indawo eyaneleyo. opacity kunye nolawulo olungenasizathu.
Inyaniso yokuba amalungu amaninzi eBhunga elinye eliLawulayo ngoku iyayixhasa ileta yababini ababesakuba ngooNobhala Jikelele ngokuphandle nasemva kwesiganeko kufuneka inike isizathu esaneleyo kwilizwe ngalinye elihlonipha oko kufunyaniswe yiKomishoni yeeNqobo zokuziphatha ukuba lithi:
... kwaye uvumele ukujonga okwesibini kwaye uqaphele utshintsho olukhulu olwenzeka phakathi kwexesha uZurab waqinisekiswa liBhunga eliLawulayo ngoJanuwari, kunye nemeko i-UNWTO ejongene nayo namhlanje.
Njengoko kuthethwe nguFrancesco Frangialli ithemba lakhe kukuba, iNdibano Jikelele, kwisikhundla sayo "kwilungu eliphezulu" le-UNWTO, liya kwenza oko kuyimfuneko ukuze kuqinisekiswe ukhetho olufanelekileyo eMadrid kunye nokubuyela ekulawuleni kakuhle uMbutho.
Ileta esandula kungeniswa nge-24 kaNovemba yiNtloko yeBhunga lesiGqeba se-UNWTO ebidibene ngoJanuwari 2021 ithi:
Amazwe aBekekileyo angamaLungu,
Inkqubo yonyulo phakathi kwabaviwa abavezwe nguRhulumente waseBahrain naseGeorgia, oqhutywe ngexesha leseshoni ye-113 yeSigqeba soLawulo, ithotyelwe kuzo zonke iingongoma kunye neMithetho, kunye nenkqubo esungulwe yiBhunga eliLawulayo kuxwebhu CE / 112 / 6 rev. .1, kunye neMigaqo yeNkqubo yeBhunga lesiGqeba esiLawulayo kunye neMithetho Jikelele yoNyulo ngoBhalo oluyimfihlo lwe-UNWTO.
KuNyulo olukhankanyiweyo, oluqhutywe ngevoti eyimfihlo ngamaLungu eSigqeba esiLawulayo avunywe ngokufanelekileyo ngokunikezelwa kweenkcukacha ezisemthethweni ezikhutshwe ngooRhulumente babo, bezinyaswe ngamaLungu angama-33 kwangama-34 eBhunga eliLawulayo akhoyo entlanganisweni, esele idweliswe apha ngasentla.
Ekugqibeleni, ngexesha leseshoni ye-113 yeSigqeba soLawulo, iqumrhu lagqiba ekubeni licebise uMnu Zurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele woMbutho kwixesha elisusela kwi-1 kaJanuwari 2022 ukuya kwi-31 kaDisemba 2025, ngesiseko seso siphakamiso isiphumo semfihlo. ukuvota phakathi kukaNksz Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, uMgqatswa woBukumkani baseBahrain, ofumene iivoti ze-8, kunye noMnu Zurab Pololikashvili, umviwa we-State of Georgia, owamkela iivoti ze-25.
Kuko konke oku kungasentla nakwisikhundla sam njengoMongameli weSigqeba esiLawulayo, ndiyaqinisekisa ukuba ngexesha lobu mongameli zonke izenzo ezenziweyo zilungelelanisiwe kwiMithetho kunye nomthetho okhoyo, unyulo olwenziwa liBhunga leSigqeba kwintlanganiso yalo yangaphambili inkqubo. iqhotyoshelwe kwimimiselo.
Ngenxa yoku kungasentla, kunye nentlonipho yeziphumo zevoti ebibanjwe kwiseshoni ye-113 yeSigqeba soLawulo, ndiyaphinda ndithi iBhunga lesiGqeba soMbutho wezoKhenketho weHlabathi, ngokuthobela amagatya eSiqendu sama-22 seMithetho kunye neSiqendu sama-29 salo. iMigaqo yeNkqubo yeSigqeba soLawulo, icebisa kwiNdibano Jikelele uMnu Zurab Pololikashvili njengoNobhala-Jikelele kwixesha le-2022-2025.
Ngaphandle kokunye, ndibalisa eyona ngqwalasela yam iphezulu kunye nentlonipho.
UMongameli weBhunga lesiGqeba se-UNWTO,
UJosé Luis Uriarte Campos, eChile
UJosé Luis Uriarte Campos ligqwetha elivela kwi-Universidad de Los Andes kunye nesidanga se-master kwiPolisi yoLuntu evela kwi-Universidad del Desarrollo.
Phantse iminyaka engama-20 yamava, unomsebenzi owaziwayo kwihlabathi likawonke-wonke, eqaqambisa umsebenzi wakhe njengentloko yabacebisi kwiSebe lezoQoqosho, uPhuhliso kunye noKhenketho; inkosi yommandla kwi-Ofisi yoMphathiswa weMisebenzi yoLuntu kunye noMlawuli weSizwe we-Sercotec.
Ngo-2014 usebenze njengoNobhala-Jikelele weSizwe soRhwebo, iiNkonzo kunye noKhenketho, echaza amaqhinga amatsha omsebenzi kunye nenkxaso yecandelo.
Namhlanje usebenza njenge-Undersecretary of Tourism, iqumrhu elixhomekeke kwiSebe lezoQoqosho, uPhuhliso kunye noKhenketho.
Kufuneka kuqatshelwe, ukuba ngokwemithombo ye-eTN ethembekileyo le leta yabhalwa ngu-Alicia Gomez, umcebisi wezomthetho we-UNWTO, kwaye unikwe umphathiswa eChile ukuba asayine.
Abathunywa be-UNWTO kufuneka benze uxanduva kwaye bavavanye zonke iinyani. Ukuba akunjalo ihlabathi lokhenketho kuya kufuneka liphile iminyaka emi-4 kunye nemiphumo.